Umhla wokuwa kwesibhakabhaka: uthando kwifilosofi kaMegan Maxwell | Uncwadi lwangoku
Mhla esiwa isibhakabhaka
UJuan Ortiz | 20/07/2021 18:41 | I-Biography, Iincwadi, Inoveli yothando
Mhla esiwa isibhakabhaka (2016) yinoveli yiSpanish María del Carmen Rodríguez del Álamo -isayinwe phantsi kwegama elinguMegan Maxwell-. Umdlalo uveza ibali elihambisayo lezihlobo ezimbalwa, abathi ukususela ebuntwaneni benza iqhina lobuzalwana elingenakuqhekeka. Umbhali ugxile ekubonakaliseni kwisiqwenga ezinye iimbono zothando lokwenene ( intanda-bulumko), ngemigca egcwele iimvakalelo kunye neemvakalelo ezinzulu ezicebisa umoya.
UMaxwell wakhe umsebenzi oqinileyo kwizangqa zoncwadi kunye neenoveli ezingaphezu kwama-40. kunye namabali asixhenxe, umsebenzi athe wafumana kuwo amabhaso amaninzi. Ukhethe ngokukodwa kumdlalo wothando, nangona sele ewenzile en abanye iintlobo, njenge intshontsho likhanyisiwe kunye nenkanuko. Kokugqibela kuyabonakala Ndibuze nantoni na oyifunayo (2012), ibali lokuqala le-erotic awayicacisa kwaye yaqala nini i-saga Ndibuza.
1 Isishwankathelo soMhla wokuwa kweSibhakabhaka
1.1 Dibana kuqala
1.2 Kuzalwa ubuhlobo obukhulu
1.3 Utshintsho olukhulu
1.4 Yonke into iqala ngaphezulu
2 Uhlahlelo lomhla esiwa ngawo isibhakabhaka
2.2 Iimvakalelo ezininzi
2.3.3 Abanye abalinganiswa
3 Malunga nombhali
3.1 Uhlanga loncwadi
Isishwankathelo soMhla wokuwa kweSibhakabhaka
alba yintombazana eneminyaka esixhenxe ubudala, ngubani, xa ndibuyela ekhaya kunye nomama wakhe -uTeresa-, ungqubeka kwiimpahla ezahlukeneyo emnyango wesakhiwo. Xa ugqibile ukunyuka izinyuko, jonga umntwana olusizi kakhulu, edumbe amehlo kukukhala. Inkwenkwe Igama lakhe nguNacho, uphila kunye nentombazana kwaye usandula ukungena nabantakwabo - uLuis, 11, noLena, 4 - kwindlu ekufuphi yakwaRededio.
Inomdla, intombazana iqala incoko ngendlela enobuhlobo noNacho, Quien le uyavuma ukuba ulahlekelwe ngabazali. U-Alba, eshukunyiswa yile nto wayithethayo, umxelela ukuba angaya kudlala endlwini yakhe nanini na efuna. Emva kwexesha, uRemedios uyavuma ukutyelela ukuze umzukulwana wakhe onwabe. Apho uxelela uTeresa ngengozi ngelishwa apho kwasweleka khona intombi yakhe kunye nomkhwenyana wakhe, abazali babantwana abathathu.
Ngeli xesha, ibali liya kumaxesha abuthathaka kakhulu. Phakathi kwemigca, UAlba uxelela uNacho ukuba abazali bakhe banokuba ngabakhe, kwaye bayathembisana ngobuhlobo obungapheliyo.
Umhla isibhakabhaka ...
Jonga umnikelo Bona amanqaku
Kuzalwa ubuhlobo obukhulu
Emva kwento eyenzekileyo, aba bantwana bathathu bashiyeka bephethe umakhulu wabo omnandi uRemedios, ukusondela okunegalelo kuNacho noAlba ukuba bangabinako ukudibanisa kwaye badibanise ubuhlobo obungenakuqhekeka. Ngexesha lama-XNUMX, bobabini bayeke ukuba ngabantwana kwaye baguqukele ekubeni kunye babe ngabantu abadala. Bakhule njengentsapho enkulu, kwaye abantu abancinci, ngaphezulu kwabahlobo, sele benayo babefana nabantakwabo.
UAlba noNacho ugcine ubudlelwane obusondeleyo, isoloko ixhomekeke kokulungileyo nokubi. Bobabini bafuna ukuthatha inyathelo eliya phambili ebomini babo, y ikhona nini intambo enzulu bobuhlobo phakathi kwabo ichaphazelekayo. UAlba uthandana uphambene endodeni, ukuya kwinqanaba lokuba yimfama kwiinkalo ezahlukeneyo. Umxholo uyalawula, kwaye ufuna ukumshiya kusapho lonke, ngakumbi kumhlobo wakhe amthandayo.
Nangona kunjalo UNacho uyamlumkisa Ukusa kwengozi ukuba lo mntu ubangela wena, pero wakhe akaphulaphuli, kwaye Ekugqibeleni uyatshata. Umyeni wakhe umsa eMadrid, wamhlula kuye wonke umntu; Ngalo mzuzu, uNacho ugqiba kwelokuba afumane elinye icala kwaye afudukele eLondon. Kulapho, ithamsanqa lakhe libonakala liguquka xa edibana neqabane lakhe lomphefumlo, kodwa ulonwabo aluhlali ixesha elide, kuba loo mntu ubhubha kukugula okungaqhelekanga.
Yonke into iqala ngaphezulu
Emva komtshato wakhe, u-Alba uthatha isigqibo sokuya eLondon ukuya kudibana nomhlobo wakhe omkhulu, ngaphandle kokukrokrela ukuba unjani. Xa ufika, umfumana engenalo olo ncumo kwaye ekhazimla emehlweni akhe loo nto ibonakalisile. Xa bebonana, bobabini baziva benemvakalelo enzulu. Uyakwazi ukumkhupha kuloo mfanekiso unxunguphalisayo kwaye bahlaziya ubuzalwana babo, kodwa kungekudala bafumanisa inyani eyoyikekayo ebafaka kuvavanyo.
UNacho ufumanisa ukuba unesifo esaziwa kancinci eyenze umonakalo ngelo xesha. Kufuneka ubalekele, kuba baqinisekisa ukuba iyosulela kwaye iyabulala, ukongeza, ayinanyango olusebenzayo. UAlba akamshiyi umhlobo wakhe kwaye ikukhuthaza yonke imihla ukuba uqhubeke. Embindini wento leyo, uthando luyankqonkqoza kwakhona kwiingcango zentliziyo ka-Alba, ngaba oku kuya kuba kukukhanya akufunayo ebusweni bobumnyama obungaka?
Uhlahlelo lomhla esiwa ngawo isibhakabhaka
Mhla esiwa isibhakabhaka yinoveli yothando ebekwe phakathi kweSpain neLondon, inamaphepha angama-416 ahlulelwe kwizahluko ezide ezingamashumi amathathu anesithathu. Ibali iqala ngo-1974, xa abalinganiswa bayo badibana okokuqala, emva koko iqhubeke kwiminyaka engama-80-90. Kubaliswa ngomntu wesithathu, ngolwimi olulula, olunika ukufunda ngokutyibilikayo kwaye kumnandi..
Eli bali lizele ziimvakalelo ezinzulu, kukungqengqa kweemvakalelo. Uvuyo kunye nosizi kuyabonakala, kodwa kunye nethemba elininzi xa ujongene nobunzima. Ngokunjalo, uthando luyaboniswa ngaphaya kwesi sibini (i intanda-bulumko), Lowo udibanisa usapho kunye nabahlobo. Kwimigca yakhe, umbhali uchaze malunga noku: "Igazi likwenza usisihlobo, kodwa kukunyaniseka nothando kuphela okwenza usapho."
Ungumfazi omhle, uyonwabile, ufundile, uyintombi elungileyo, umhlobo olungileyo kunye nentliziyo entle. Ngenxa yokungakhathali kunye nokuthandana, uyathandwa ngumntu ombi, kwaye Kuya kufuneka akhule ngesiquphe emva kokungaphumeleli emtshatweni. Uphuma kuloo meko yomelele, eya kuthi ibaluleke ukuxhasa umhlobo wakhe osenyongweni, uNacho, amthandayo ngaphandle kwemeko.
Es yindoda edlamkileyo nephumayo, iyabuthanda ukonwabela ubomi bayo ngokupheleleyo. Emva kwezithintelo eziqhubekayo xa wayefuna iqabane, waphantse wayishiya le mbono, kodwa uhambo oluya eLondon lumenza ahambisane nothando ngomlingo. Ukususela ebuntwaneni, Ungumhlobo othembekileyo ka-Alba, uyamthanda kakhulu kwaye unaye ukuba azibonakalise njengoko enjalo. Ngaphandle kokugula okugazini ekugqibeleni, akaze aphulukane nethemba kwaye azame ukusidlulisela kubo bonke abathandekayo.
Abalinganiswa kule noveli ngabantu bemihla ngemihla, abaqhelekileyo kunye neemvakalelo ezintle. Wonke umntu, Zombini eziziiprayimari nezizisekondari, ziyalincedisa ibali kwaye zizisa ubudlelwane kunye namaxabiso abalulekileyo. Ukongeza kubalinganiswa abaphambili, ukuthatha inxaxheba koomakhulu, uBlanca noRemedios; yomzali. UTeresa noJosé; kunye nabazalwana, uLuis noLena.
Kule ngxelo, UMegan maxwell Ngobuqhetseba nobuchule esi sifo sabulala abantu abaninzi eSpeyin. Ngale nto, umbhali ubonakalisa ubunyani bexesha kunye nendlela uluntu olwajamelana ngayo nale meko, kuba ixesha elide lalithathwa njengelingabalulekanga.
UMaria del Carmen URodriguez weAlamo ezelwe ngolwesiHlanu, kuFebruwari 19, 1965 eNuremberg, eJamani; Utata wakhe ngowaseMelika kwaye ngowakhe Umama waseSpanish. Xa wayenenyanga ezintandathu kuphela ubudala, unina ndagqiba kwelokuba ndibuye naye ukuya eSpain. Ukusukela ngoko, ebehlala kwizixeko ezininzi zeli lizwe, ezinje nge: Barcelona, ​​Cádiz naseMadrid, yiyo loo nto enobuzwe baseSpain.
Emva kwengxaki yempilo nonyana wakhe, uthathe isigqibo sokuthatha umhlala-phantsi emsebenzini ukuze amnyamekele ekhaya. Pha, Uqale ikhosi yoncwadi kwi-Intanethi kwaye waqala ukubhala iinoveli ezininzi phantsi kwegama elingu "Megan Maxwell." Emva kweminyaka elishumi yokuhlelwa okungalunganga, ngo-2009 ingxelo yakhe yokuqala yamkelwa: ndikuxelele, kwaye ngo-2010 waphumelela i-Seseña International Romance Award.
Ukusukela ngoko, Umbhali akayekanga, upapashe iinoveli ezingama-45 apho abandakanya khona iisaga ezintathu: Amagorha uMaxwell, ndibuze y UAdivina. Kwiwebhusayithi yakhe, uyavuma: “Ndiyathanda ukubhala umdlalo wothando kwaye ndipapasha iintlobo ezahlukileyo njenge intshontsho likhanyisiwe, yangoku, ephakathi, ukuhamba kathathu y inkcubeko”. Umxube ofanayo wezitayile ubonakalisile umsebenzi ophumeleleyo wokubhala waseSpain.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli yothando » Mhla esiwa isibhakabhaka
Incwadi yesimemo yegeisha
ICathedral yeNcwadi yoLwandle